Kim Min-sang – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Man Standing Next (2020) Unicode BASED ON TRUE EVENT (ဖွဈရပျမှနျအားအခွခေံထားသညျ) ဒီဇာတျကားဟာ ဖွဈရပျမှနျ ရုပျရှငျတဈကားဖွဈပွီး The President last bang ဆိုတဲ့ ဇာတျကားထှကျပွီး နောကျပိုငျးမှာ ပွနျလညျအမှနျးတငျရိုကျကူးထားတဲ့ဇာတျကားလေးပါ။ အားလုံးစိတျဝငျတစားရှိမယျ့အကွောငျးအရာဖွဈခဲ့တဲ့ Taxi Driver , May 18 တို့လို နိုငျငံရေးတျောလှနျမှုတှေ ဖွဈတဲ့အခြိနျကို ပွနျလညျရိုကျကူးတငျပွထားပွီးတော့ တောငျကိုရီးယားရဲ့ နိုငျငံရေးမတညျငွိမျမှုသမိုငျးတှကေို ပွနျလညျတှမွေ့ငျရမှာပါ။ မငျးသားကွီး လီဗြောငျဟှနျးအပွငျ အခွားသော ဝါရငျ့သရုပျဆောငျမြားစှာနဲ့ရိုကျကူးထားပွီး စဈတပျအာဏာသိမျးခွငျး၊ အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျးစပျကွား ဒီမိုကရစေီပွောငျးလဲနိုငျရေးကွိုးပမျးနတေဲ့ကာလကိုလညျး ရိုကျကူးပွသထားပါတယျ။ အမရေိကနျနဲ့ ကိုရီးယားအကွားမှာ တငျးမာမှုတှေ ဒီမိုကရစေီ ဆိုငျးဘုတျပွကာ နိုငျငံရေး ခယျြလှယျမှုတှနေဲ့ ထောကျလှမျးရေးပိုငျးဆိုငျရာ ရကျစကျမှုတှေ နိုငျငံရေးလှညျ့ကှကျမြားစှာကိုလညျးတှမွေ့ငျရမှာပါ။ ၁၉၇၉ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ ၂၆ ရကျ သမ်မတကွီး ပတျခြောငျဟီး ဆိုသူလုပျကွံခံရတဲ့အခြိနျမတိုငျခငျရကျ ၄၀ အတှငျးမှာဖွဈပကျြပွောငျးလဲသှားတာကို ရိုကျကူးပွသထားတာပါ။ သမ်မတပတျခြောငျဟီး ၁၉၆၃ ခုနှဈကနေ ၁၉၇၉ အထိ ...
IMDB: 7.1/10 688 votes
Silenced (2011) မနေ့ညနေက ကျွန်မ ကိုးရီးယားကားတစ်ကားကြည့်ဖြစ်တယ်။အဲဒီကားကို ခုထိကြည့်လို့ မပြီးသေးဘူး။ရုပ်ရှင်က ရှည်လို့မဟုတ်ဘူး..တစ်ကားပြီးပါပဲ။ဒါပေမယ့် အဲဒီရုပ်ရှင်ကို ကျွန်မကြည့်လိုက် ဆက်မကြည့်ရက်လို့နားထားလိုက်၊ ပြန်ကြည့်လိုက် ဆက်မကြည့်ရက်လို့ နားထားလိုက် လုပ်နေခဲ့လို့ပါ။ . အဲဒီရုပ်ရှင်ကားက “Silenced” (သို့) “The Crucible” လို့နာမည်ရတဲ့ကားဖြစ်တယ်။ဇာတ်ကားပါ အကြောင်းအရာက ဆွံ့အ နားမကြားကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာနှစ်ကာလကြာရှည်စွာ မုဒိမ်းကျင့်၊ မတရားအနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာ အဲဒီကိုပြောင်းလာတဲ့ဆရာအသစ်တစ်ဦးရဲ့အကူအညီနဲ့ အဖြစ်ဆိုးကလွတ်မြောက်ပြီးကျောင်းအုပ်ကြီးအပါအဝင် ဆရာအချို့ကို တရားဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့် ရေများရေနိုင်၊ မီးများမီးနိုင်ဆိုသလို တရားခံတွေဟာကြေးရတတ်၊ အာဏာရှိသူတွေဖြစ်တာကြောင့် ထိုက်သင့်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကို မခံခဲ့ကြရပါဘူး။ . ကျွန်မ အဲဒီကားကြည့်နေရင်းနဲ့ စိတ်နှလုံးမခိုင်လို့ခဏရပ်လိုက် ဆက်ကြည့်လိုက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဒါဟာ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ထားတာများလားဆိုပြီး စိတ်ထဲသံသယရှိလာတာနဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဆက်မကြည့်တော့ဘဲ အဲဒီရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုဝီကီမှာ ကျွန်မ အရင်ရှာကြည့်လိုက်တယ်။. ဒီဇာတ်ကားက ကိုးရီးယားနာမည်ကြီး စာရေးဆရာမ Gong Ji-young ရဲ့နာမည်တူဝတ္ထုကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီဝတ္ထုက ၂ဝဝဝခုနှစ် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ Gwangjuမှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးတဲ့ဆွံအနားမကြားကျောင်းတစ်ကျောင်းကအဖြစ်ကို အခြေခံထားတာဖြစ်တယ်။၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မှာ စာရေးဆရာက အဲဒီအဖြစ်ကို တီဗွီသတင်းတိုတိုထွာထွာမှာအမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်မိပြီး စိတ်ဝင်စားသွားခဲ့တယ်။Gwangju က ဆိုးလ်မြို့နဲ့ ...
IMDB: 8.1/10 8,352 votes